कविता भन्छिन्, केटा साथी धेरै छन् तर प्रेम प्रस्ताव गर्न कोही आएनन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कविता भन्छिन्, केटा साथी धेरै छन् तर प्रेम प्रस्ताव गर्न कोही आएनन्
काठमाडौं । नेपाली नृत्य प्रतियोगिता बुगी वुगीबाट कविता नेपाली लोकप्रिय भइरहेकी छिन् । बुगीवुगी विजेता उनी आफ्नो कला र संगै बौद्धिकताको कारणले पनि चर्चामा रहिन् । सामन्य परिवारकी उनले बुगी वुगी जित्नुले उनले आफ्नो जीवनमा एक कदम अगाडी बढेकी पनि छिन्।
शारीरिक सुन्दरताले पनि आकर्षक कविता नेपाली अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो केही दिन अगाडी सार्वजनिक भएको थियो । पहिलो पटक म्युजिक भिडियोमा काम गरेता पनि म्युजिक भिडियोमा संगै काम गरेका अभिनेता पल शाहले धेरै कुरा सिकाएको हुनाले सजिलो भएको उनले बताएकी छिन् । पल शाहसंग संगै पर्दामा देखिन पाउनु आफ्नो लागि राम्रो अवसर रहेको बताउंदै उनले कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडी बढ्नको त्यो अनुभवले आफूलाई सघाउ पुग्ने बताएकी छिन्।
अरु सामान्य नेपाली परिवार जस्तै कविताको परिवारले पनि उनलाई नृत्यमा भन्दा बढी पढाइमा केन्द्रित रहन सुझाव दिन्थ्यो र नृत्यलाई भविष्य नसोंचेर, राम्रो जागिरमा स्थापित हुन सल्लाह दिन्थ्यो । तर बुगीवुगी जितेपछि भने परिवारले आफूलाई पूर्ण साथ दिएको उनी बताउँछिन्।
कविताका अनुसार, उनी स्कुल पढ्दा टमब्वे जस्तै थिइन् । केटी साथी भन्दा उनका केटा साथी धेरै थिए । त्यसैले उनलाई प्रेम प्रस्ताव, प्रेम पत्रहरु आएनन् । बुगी वुगी जितिसकेपछि सामजिक संजालमा केहीले त्यस्ता किसिमका संदेश पठाउने गरेको उनी बताउँछिन्।